SIM akwadoghi na iPhone? Nke a bụ ndozi ahụ! - Payette Gaanụ n’ihu - Iphone
mperi mere mgbe ị na -enyocha iphone update software
iphone na -arụ ọrụ na igwe okwu
kedu ihe ọ pụtara ma ọ bụrụ na ị rọrọ nrọ maka oke
SIM akwadoghi na iPhone? Nke a bụ ndozi!
Naanị itinye kaadị SIM ọhụrụ na iPhone gị, mana ihe anaghị arụ ọrụ nke ọma. Ekwentị gị na-agwa gị na kaadị SIM anaghị akwado. N'isiokwu a, m ga-egosi gị otú idozi nsogbu mgbe ọ na-ekwu 'SIM anaghị akwado' na gị iPhone !
iphone m 6 anaghị ada ụda
Gịnị Mere My iPhone SIM anaghị akwado?
An iPhone na-ekwukarị a SIM na-anaghị akwado n'ihi na gị iPhone na-ekpochi gị ụgbọelu. Nke a pụtara na ịnweghị ike itinye kaadi SIM site na ụgbọelu dị iche ma ọ bụrụ na ịgbanwee.
Elele ma ọ bụrụ na gị na iPhone na-ekpochi, na-emeghe Ntọala na enweta General -> Banyere -> riergbọelu mkpọchi . Otu agbachi iPhone ga-ekwu Enweghị Mmachibido SIM .
Ọ bụrụ na ịhụghị nhọrọ a, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ na-ekwu ihe ọzọ, kpọtụrụ onye na-ahụ maka ikuku gị gbasara ịmeghe iPhone gị.
Ọ bụ ezie na ọnọdụ ahụ akọwapụtara n'elu nwere ike ịmetụta ọtụtụ n'ime gị, ọ gaghị emetụta mmadụ niile. O yighị ka ọ ga - eme, mana ịnwere ike ịnwe nsogbu ngwanrọ kama. Soro usoro dị n'okpuru iji dozie nsogbu ahụ.
Ibidogharịa iPhone gị bụ ngwa ngwangwa maka ọtụtụ nsogbu sọftụwia. Tozọ Malitegharịa ekwentị gị iPhone dịgasị dabere na nke nlereanya i nwere:
iPhones na ID ihu : N'otu oge pịa ma jide ma bọtịnụ ike na ma ọ bụ bọtịnụ olu ruo slide ka ike gbanyụọ ogosiri na enyo. Swipe akara ngosi ikike site n'aka ekpe gaa n'aka nri gafee ihuenyo iji mechie iPhone gị. Pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ ọzọ ruo mgbe akara Apple gosipụtara na ihuenyo iji gbanye iPhone gị ọzọ.
iPhone enweghị ID NJ Pịa ma jide bọtịnụ ike , wee swipe akara ngosi ike n'ofe ihuenyo mgbe slide ka ike gbanyụọ na-egosi. Pịa ma jide ike bọtịnụ ọzọ reboot gị iPhone.
Lelee Maka Mmelite iOS
Apple na-ewepụta mmelite iOS ọhụrụ iji dozie obere chinchi wee wepụta atụmatụ ọhụrụ. Ọ bụ ezigbo echiche idobe iPhone gị oge ọ bụla, mana ọ nwekwara ike idozi nsogbu a.
Kpatụ Mmelite ngwanrọ .
Kpatụ Ibudata na Wụnye ma ọ bụrụ na mmelite iOS dị. Bugharịa n'elu nzọụkwụ ọzọ ma ọ bụrụ na gị iPhone bụ ruo ụbọchị.
Kpọgharịa ma tinyeghachi Kaadị SIM
Atingchọgharị kaadị SIM gị iPhone nwere ike idozi ọtụtụ obere nsogbu. Chọọ maka kaadị SIM kaadị na n'akụkụ nke gị iPhone.
Jiri a SIM kaadị ejector ngwá ọrụ ma ọ bụ a ịgbatị si paperclip imeghe tree. Pinye tray ahu ka ochigharịa kaadi SIM.
A na-eweghachi ntọala Cellular gị, Wi-Fi, Bluetooth, na VPN nke iPhone gị na nrụpụta ụlọ ọrụ mgbe ịtọgharịa Ntọala Ntọala. Gbalịa dee okwuntughe Wi-Fi gị, ebe ị ga-agbanyeghachi ha mgbe nrụzigharị a zuru ezu. Ga-agbanyekwa ngwaọrụ Bluetooth gị ma hazie VPN gị ọ bụla.
Ọ bụ ezie na ọ bụ obere nsogbu, nrụpụta a nwere ike idozi nsogbu a. Iji tọgharịa Network Ntọala:
Kpatụ Tọgharia Network Ntọala .
Enwere ike ịgwa gị ịbanye passcode gị tupu ịmee nrụpụta a.
esi edozi ipad anaghị chaja
Kpọtụrụ Apple Ma ọ bụ riergbọelu Ikuku Gị
Mgbe okwu mkpanaka na-eme na iphone gị, Apple na onye na-ebu ikuku gị ga-erụ aka na ibe ha. Eziokwu bụ na enwere ike ịnwe nsogbu na iPhone gị ma ọ bụ akaụntụ gị na onye na-ebu ikuku gị, ị gaghị ama ruo mgbe ị ga-enweta nkwado nke ndị ahịa ha.
Lelee ebe nrụọrụ weebụ Apple ka nweta nkwado n'ịntanetị, in-store, na ekwentị, ma ọ bụ site na nkata ndụ. You nwere ike ịchọta ụlọ ọrụ ahịa nke onye na-ebu gị site na iji kọmputa ede aha ha na 'nkwado ndị ahịa' na Google.
iPhone SIM Ugbu a akwado!
’Ve edozila nsogbu ahụ ma iPhone gị na-arụ ọrụ ọzọ. Oge ọzọ iPhone gị kwuru 'SIM anaghị akwado', ị ga-ama kpọmkwem ihe ị ga-eme. Hapụ ikwu n’ala ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla!